7 Best Day Trips Avy Naples In Italia | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Best Day Trips Avy Naples In Italia
Naples no tena tsara, quintessential Italiana tanàna. Feno havoana, trano taloha, sy ny kely na mahafatifaty fahagagana. Izany dia ny tonga lafatra indrindra Italiana tanàna ho an'ny olona rehetra izay te hiaina ny tena Italiana fanahy sy ny tsara indrindra avy any Naples andro fitsangatsanganana.
Na izany aza, izay tsy ny rehetra. Ianao dia mila mankanesa any Naples noho ny asa lehibe pizzas manao. Ny pizzas Tsy ny tsara fanahy isan'andro ianao dia afaka mahita na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Ny Napoli ny pizza dia zavatra tsy manam-paharoa, ary mirehareha ny tsirony izay tsy azo mifanentana.
Fa izahay manalavitra. Raha tsapanao fa mitady tany Naples, tsy tokony handany fotoana rehetra variana izahay tamin 'ny hatsaran-tarehy ny tanàna ary nihinana ny be voninahitra ny pizza. Ianao koa dia mila mitsidika ny manodidina. Izany dia satria Naples mirehareha ny sasany amin'ireo manodidina tsara tarehy indrindra amin'ny rehetra Italia. Avy amin'ny Pompéi goavana rava ny tarehy ary tsy mahagaga Amalfi malaza morontsiraka - ianao dia afaka mahita be dia be.
Dia ao an-tsaina, dia nihevitra izahay fa hanampy anao amin'ny alalan'ny fanomezana anao ny lisitra farany ny fito andro fitsangatsanganana tsara indrindra avy any Naples, Italia. Aoka isika hanomboka:
1. Iray amin'ireo tsara indrindra avy Day Trips Naples: Sisa tavela amin'i Herculanum
Izahay tsy te hanomboka amin'ny miharihary fa ny tsy hita. Herculanum no tsy dia malaza mpiray tam-po ny Pompéi. Ny malaza ankehitriny 79 AD fipoahan'ny Volkano Vésuve rava na Pompéi sy Herculanum ny manodidina.
Na izany aza, amin'izao fotoana izao, rehetra ny voninahitry hankany Pompéi. Saika ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao no mahalala izay Pompéi, mbola vitsy dia vitsy Fantatrao Momba ny Herculanum. Izany no lehibe mahamenatra raha manontany anay.
Voalohany indrindra, Herculanum voaro kokoa. Rehefa tonga any ianao, dia ho hitanao ny ankamaroan'ny trano sy ny tsangambato efa ho simba.
faharoa, Herculanum dia zara raha Feno. Araka ny efa nanao hoe:, ireo sisan-javatra rava ireo tsy fantatra ary nitsidika in kely isa. Izany ihany koa kely sy mora kokoa ny mahita amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Visiting Herculanum dia tena mora, toy ny fiarandalamby handeha ho any avy tany Naples eo ho eo isaky ny ora. Tsy dia mila miahiahy momba ny fotoana toy ny anao dia tsy betsaka izany ny mahita ireo sisan-javatra rava.
Na dia tsara tarehy kokoa Herculanum, amin'ny heviny, tsy afaka malahelo Pompéi. tsara, ny tsara indrindra avy any Naples andro fitsangatsanganana maintsy ahitana foana na Pompéi sy Herculanum.
Ny tanànan'i Naples manontolo mipetraka any amin'ny aloky ny mahery Vésuve. Na izany aza, Pompéi ihany no tena afaka milaza fa mahalala ny herin'ny Vésuve. Azonao atao ny mahita ny tendrombohitra, rehefa ao Pompei, ary afaka tena hahatakatra ny herin'ny mavitrika ihany no volkano any Eoropa.
Rehefa mandeha any Pompéi, tokony ho vonona. Ny toerana dia goavana kokoa noho ny ankamaroan'ny olona mihevitra, dia tsy maintsy mandeha toy ny tany am-boalohany any araka izay azonao atao. Ankoatra izany, raha mandeha amin'ny fahavaratra, dia tena mafana, izany dia mila hitondra rano betsaka.
Na izany aza, mahazo ny Pompéi no ampahany tsotra indrindra. Afaka hahatratra izany haingana avy any Naples amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby, izay mandeha ao mandritra ny tontolo andro.
3. Iray amin'ireo tsara indrindra avy Day Trips Naples: Volkano Vésuve
mazava ho, tsy nitsidika an'i Naples dia afaka ny ho tanteraka raha tsy nahita Vésuve. Ara-bakiteny ianao dia tsy afaka mandeha raha tsy mahita izany noho ny habeny goavana izay azo jerena amin'ny saika na aiza na aiza ao Naples.
Na izany aza, afaka hiaina tsara tsy avy lavitra, afa-tsy amin'ny nitsangana teo aminy. Ny tendrombohitra Tena avo be, nefa mbola afaka maka ny voalamina ny fitetezam-paritra sy ny tongotra amin'ny ora na latsaka. Ho sarotra, fa ny traikefa ianao dia hahazo ao an-tampon'ny dia mendrika tanteraka izany.
Mba hahatongavana Volkano Vésuve, ny hany ilainao dia ny maka andro fifadian-kanina fiaran-dalamby avy any Naples izay mitondra anareo ho akaiky ny ambany ny Ercolano Scavi-peo. Avy eo dia mila maka iray amin'ireo VESUVIO Express bus izay mandeha any amin'ny fiaingana ny onony sarotra fitsangantsanganana.
Pescara an'i Naples Lamasinina
The manontolo Amalfi Coast dia mangataka fotsiny mba ho hita. Rehefa mankany, ianao tonga saina haingana ny antony. Ny harambato no talanjona goavana manentana ny fanahy, ary ny hatsaran-tarehy any an-dranomasina dia tsy hay lazaina.
Ianao dia mila maka fiaran-dalamby na mitaingina ny Sorrento na Salerno. Avy eo dia afaka maka fiara fitateram-bahoaka na manofa fiara mba hankany an-dafin'ny lalana kely izay nita ny morontsiraka Amalfi.
Positano mahitsy eo afovoan'ny amoron-tsiraka ary indrindra tanàna tsara tarehy eo amboniny. Raha toa ve ianao nahita na sary ny tanàna ao amin'ny Morontsirak'i Amalfi, Azo inoana fa efa tena nahita Positano. Ny laza efa manodidina ny tanàna dia mendrika, tahaka ny toerana manodidina dia mahatalanjona.
Power Lamasinina an'i Naples
Salerno an'i Naples Lamasinina
Taranto an'i Naples Lamasinina
5. Iray amin'ireo tsara indrindra avy Day Trips Naples: Sorrento
Sorento dia tanàna kely izay mipetraka eo amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny fari-Amalfi. Dia toy izany no akaiky kokoa Naples, ary afaka tonga koa ny tena mora foana izany amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby an-toerana tsipika.
Ny tanàna mirehareha roa namely torapasika tsara tarehy sy ny tanàna taloha. Ny ankamaroan'ny olona mankanesa any Sorrento, tsy noho ny ranomasina sy ny mahatahotra hantsam-bato, fa ho an'ny tantara. Sorrento tokoa quintessential antitra iray tanàna Italiana. Tsy lavitra kely noho Naples ary manana fa tena antitra fanahy italiana Italiana kely ihany no tanàna any amin'ny tany atsimo afaka.
Ankoatra izany, ianao dia tokony Tena hitsidika Sorrento amin'ny iray amin'ireo tsara indrindra avy any Naples andro fitsangatsanganana noho ny Capri. Ny Nosy Capri dia akaiky ny, ary lavitra dia amin'ny alalan'ny iray amin'ireo nosy kely tsara tarehy indrindra anao ve ny.
Foggia an'i Naples Lamasinina
Tivoli any Naples Lamasinina
Temoli an'i Naples Lamasinina
Lecce an'i Naples Lamasinina
6. Ny Island Of Ischia
Nosy tsara tarehy maro NANODIDINA Naples. Na izany aza, avy lavitra ny tena tsara tarehiko dia Ischia, ary eto no antony:
Ischia no nosy lehibe indrindra ao amin'ny Bay ny Naples
Ischia manana izany rehetra izany: tora-pasika, rano mafana, trano fisakafoanana, ary asa lehibe trano
Izany no toerana tsara indrindra ho an'ny fialam-boly ao Naples. Azonao atao koa ny mahazo izany haingana amin'ny alalan'ny fanaovana ny sambo avy any afovoan-tanànan'i Naples.
7. Reggia Di Caserta: Italiana Versailles
Tsy hoe goavana ity 1200 efitra lapan'ny Italiana Versailles na inona na inona. ny lapa Feno goavana tohatra sady toy ny UNESCO World Heritage Site. Ho fanomezana be dia be koa ny mpanjaka hahita trano sy ny fanangonana ny presepi - Noely cribs ny Naples.
Rehefa nozohina, tsy afaka mandeha diso amin'ny alalan'ny fitsidihana ity lapa goavana. Afaka maka fiaran-dalamby avy any amin'ny foibe any Naples gara ary mialà amin'ny Caserta-peo. Ny lapa dia fohy ihany no mandeha rehefa afaka izany,.
Naples ho Caserta Lamasinina
Salerno ho Caserta Lamasinina
Fahefana Caserta Lamasinina
Bari ho Caserta Lamasinina
Noho izany, any no asaivo, ny fito andro fitsangatsanganana tsara indrindra avy any Naples. Raha te-tena hiaina ny hatsaran 'Naples, mila mandeha rehetra ireo nivezivezy. koa, raha te-hahafantatra bebe kokoa, dia aza misalasala mifandray Save A Train.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “7 Best Day Trips Avy Naples In Italia” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com% Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Daytrips europetravel italyvacation Naples Naples Tranride fiaran-dalamby soso-kevitra travelitaly traveltips